century commercial bank(century commercial bank) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
century commercial bank
सेञ्चुरी बैंकको नाफामा गिरावटः निक्षेप\_कर्जा बिस्तारमा आक्रामक, एनपीएल घट्यो
काठमाण्डौ । उद्योगकै सबैभन्दा कान्छो वाणिज्य बैंक सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको खूद नाफा घटेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७\_७८ को चौथो त्रैमाससम्म ७५ करोड मात्र खूद नाफा आर्जन गरेको देखिएको हो । यो भनेको अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५ करोड ४५ लाखले कम हो। समीक्षा अवधिसम्म ९ अर्ब ३ करोड चुक्तापूँजी रहेको कम्पनीको वितरणयोग्य मुनाफा ५९...
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको आज सोमबार बिहान बसेको बैठकले २०७७ असार मसान्तसम्म कायम चुक्तापुँजी ८ अर्ब ४१ करोड ५४ लाख ७१ हजार ५७६.३० रुपैयाँ तथा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफाबाट वितरण गर्न बाँकी रहेको १६ करोड ८३ लाख ९ हजार ४२३.७० रुपैयाँबराबरको...
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले आज आइतबारबाट बाँकेको कोहलपुरमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । योसँगै बैंकको शाखा सञ्जाल ११४ पुगेको छ। ग्राहकको सेवामा थप विस्तार गर्ने उद्देश्यले कोहलपुर–११ बाट बैकिङ सेवासुरु गरेको हो। सबै क्षेत्रसम्म बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले यसअघि बैंकले विभिन्न स्थानमा शाखा,...
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको अनलाइन अकाउन्ट सेवा सुरु, यस्ता छन् फाइदाहरु
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले डिजिटल बैंकिङलाई अझै सहज बनाउने प्रयासस्वरुप ग्राहकको सेवालाई ध्यानमा राखी सेञ्चुरी सहज खाता र सेञ्चुरी क्लिक अकाउन्ट भन्ने दुई प्रकारको अनलाइन अकाउन्ट सेवा सुरु गरेको छ। कोरोना महामारीका कारणले गर्दा बैंकका सेवाग्राहीलाई पर्न गएको विभिन्न बैंकिङ समस्याको समाधान गर्दै डिजिटल बैंकिङलाई अझै...
नयाँ आ.ब.मा बैंकिङमा फरक परिदृश्य, विजिनेश ग्रोथमा सेञ्चुरी र सिभिल अगाडि
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको २ महिनाको अवधिमा कतिपय बैंकहरुबीच विजिनेश खोसाखोसको जात्रा चल्यो, चलिरहेकै छ । यो अवधिमा ठूला भनिएका कतिपय वाणिज्य बैंकहरु समेत निक्षेप र कर्जा परिचालनमा कमजोर देखिए । तर, यो अस्तव्यस्त र अन्यौलपूर्ण भनिएको अवधिमा केही सानो साइजका बैंकहरुले भने विजिनेशमा अपत्यारिलो ग्रोथ गरेका छन् । संकटका बेला ‘मै...
सेञ्चुरी बैंकको नाफा ३४%ले बढ्यो, रिजर्भमा ५२.१९%को उछाल
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडको गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमाससम्म खुद नाफा ३३.९९ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ। बैंकको शुक्रबार सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकको खुद नाफा ९० करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्म ६७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ...
सेञ्चुरी बैंकद्वारा थ्रीडी सेक्योर भिसा डेबिट, क्रेडिट र ट्राभल कार्ड सेवा प्रारम्भ
काठमाण्डौ । आफ्ना ग्राहकका लागि सधैँ उच्च गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडद्वारा आइजेलियान्ट टेक्नोलोजिज इन्डियासँगको सहकार्यमा थ्रीडी सेक्योर सेवा प्रारम्भ गरेको छ। उक्त सम्झौताअनुसार सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको भिसा डेबिट, क्रेडिट तथा ट्राभल कार्डबाट पैसा निकाल्न र सामान खरिद गर्नमात्र...
सेन्चुरी कमर्सियल बैंकबाट कुन कर्जा कति ब्याजमा पाइन्छ ?
काठमाण्डौ । सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले आज शुक्रबारबाट लागू हुने गरी विभिन्न कर्जाको ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकको आधारदर ९.३८ रहेको छ। यो आधार दरमा प्रिमियम दर जोडेर बैंकले कर्जा प्रवाह गर्नेछ। बैंकले घर कर्जा समयावधिको हिसाबले ३ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिसम्म प्रिमियम दर कायम गरेको छ। जसअनुसार १० वर्षसम्मका लागि ३ �...
ब्याजदर अझै घट्छ
-मनोज न्यौपाने(डेपुटी सीइओ) सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमीटेड यसपटकको मौद्रिक नीतिलाई सबै क्षेत्रले स्वागत गरेका देखियो । बैंकिङ क्षेत्रका लागि चाहिँ यो मौद्रिक नीति कत्तिको सुखद रह्यो ? बैंकिङ व्यवसाय त्यतिबेला मात्र चल्छ, जतिबेला व्यापार व्यवसाय चल्छ । अहिले व्यापारी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिका कारण राहात महसुस गरेको अवस्था छ । यसले...
सेञ्चुरी बैंकका लगानीकर्ताले अन्तरिम लाभांश पाउने
काठमाण्डौ । कोभिड १९ को मारमा परेका आफ्ना सेयरधनीलाई सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले राहात स्वरुप ३ प्रतिशत अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । देशकै कान्छो वाणिज्य बैंक, सेञ्चुरीको गत वर्षको लागि वार्षिक साधारणसभा कोभिड १९ प्रकोपकै कारण हुन सकेको छैन । साधारणसभा नहुँदा संचालक समितिबाट गत वर्षको वितरणयोग्य मुनाफाबाट घोषित लाभांश...
तेस्रो त्रैमासमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकद्वारा अधिकांश सूचकमा प्रगति, यस्तो छ वित्तीय विवरण
काठमाण्डौ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले अधिकांश वित्तीय सूचकमा प्रगति गरेको छ। तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले समीक्षा अवधिसम्म गत वर्षको तुलनामा ४९.९६ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ। समीक्षा अवधिसम्म बैंकको खुद नाफा ९१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। बैंकले गत वर्ष यही अवधिसम्म २ अर्ब...
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक र एफवान सफ्ट इन्टरनेशनलबीच मोबाईल बैंकिङ सेवाका लागि सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट चिफ बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर सुवासबहादुर श्रेष्ठ र एफवान सफ्टका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास शर्माले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अनुसार अब बैंकले सेञ्चुरी पे नामक मोबाईल एप्स्...
कोरोना रोकथामका लागि सेञ्चुरी बैंकले रु. ८५ लाख दिने
काठमाण्डौ । देशकै कान्छो वाणिज्य बैंक, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमीटेडले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट स्थापित कोषमा ८५ लाख रुपैयाँ सहयोगको निर्णय गरेको छ । बैंकले बिहीबार यस्तो निर्णय गरेको हो । सेञ्चुरीले ७ वटा प्रदेश सरकारबाट स्थापित कोरोना रोकथाम कोषमा ५ लाख रुपैयाँको दरले ३५ लाख र केन्द्रीय सहयोग...
सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको वार्षिक साधारणसभा स्थगित
काठमाण्डौ । कोरोनाभाइरसबाट सिर्जित परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले यही चैत १४ गते तय गरेको नवौँ वार्षिक साधारणसभा स्थगित गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको हिजो बिहीबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा स्थगित गर्ने निर्णय लिएको हो। नेपाल सरकारद्वारा गठित कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय...
वायुसेवा सञ्चालकद्वारा १ वर्षको ब्याज मिनाहा गर्न माग, अप्रिल १ बाट सबै हेलिकप्टर ग्राउन्डेड
काठमाण्डौ। विश्वव्यापी महामारी कोरोनाभाइरसले अकल्पनीय संकट देखा परिरहेको भन्दै वायुसेवा सञ्चालकहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नेपाली तथा विदेशी मुद्रामा लिएका सम्पूर्ण ऋणहरुको कम्तीमा एक वर्षको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरेका छन्। वायुसेवा सञ्चालकहरुको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालको बिहीबार बसेको...